octobre 2018 – filazantsaramada
« Koa aoka isika hanatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana, mba hahazoantsika famindrampo sy hahitantsika fahasoavana ho famonjena amin’izay andro mahory. » (Hebreo 4:16) Misy fotoana eo amin’ny fiainana izay mahavery hevitra antsika tokoa. Eny, mitady hamoy fo aza. Aoka anefa isika ho sahy. SAHY manatona ny seza fiandrianan’ny fahasoavana amin’ny fahasahiana noho ny amin’ny ràn’i […]
Publié parfilazantsaramada octobre 26, 2018 octobre 26, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur SAHY …
« Ary efa notafianareo ny toetra vaovao, izay havaozina ho amin’ny fahalalàna tsara araka ny endrik’Izay nahary azy. » (Kolosiana 3:10) Inona moa ny hoe toetra taloha: fitondran-tena tamin’ny filan’ny nofo isan-karazany, fanaovana ny danin’ny nofo, danin’ny saina. Ny fanaovana izany no mahatonga ny olona ho zanaky ny fahatezerana na koa mitoetra eo ambany fahatezeran’Andriamanitra. Ankehitriny isika […]
Publié parfilazantsaramada octobre 19, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TOETRA VAOVAO
FITIAVANA NY RAY
« Aza tía izao tontolo izao, na izay zavatra eo amin’izao tontolo izao. Raha misy olona tía izao tontolo izao, dia tsy ao anatiny ny fitiavana ny Ray » (1Jaona 2:15) Isika tía ny Ray rehefa tsapantsika ny fitiavany antsika. Raha tía izao tontolo izao isika día tsy ho tsapantsika mihintsy izany fitiavany izany. Inona moa ny […]
Publié parfilazantsaramada octobre 12, 2018 octobre 12, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur FITIAVANA NY RAY
TAHAKA NY ZAZA
« Koa na zovy na zovy no hanetry tena tahaka ity zazakely ity, dia izy no lehibe indrindra amin’ny fanjakan’ny lanitra. » Matio 18:4 Manetry tena ny zaza. Manaiky izay zava-misy izy. Manaiky antsoin’i Jesosy hankeo Aminy ka manaiky apetraka eo afovoany. Na dia ny fanekena hankeo amin’i Jesosy aza dia sarotra amintsika indrindra ny manetry tena. […]
Publié parfilazantsaramada octobre 5, 2018 octobre 5, 2018 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur TAHAKA NY ZAZA